FAQs - QALABKA MAASHINKA BAASILE
Q1: Waa maxay alaabtaada ugu muhiimsan iyo sahayda alaabta?
A: Alaabooyinkayaga ugu muhiimsan Qaybaha Mashiinka ee saxda ah ee CNC (Birta Kaarboon, Birta Alloy, Aluminium aluminium, Birta Aluminiumka, Naxaasta, Copper, Alloy Titanium ama Qaybaha kale ee Gaarka ah), Qaybaha Sheet Metal, Qaybaha Shaabadda, iyo sidoo kale Qaybaha Duritaannada.
S2: Ma leedahay awood kugu filan?
A: Qalabka wax-soo-saarkayaga ayaa leh tayo sare leh.Waxaan leenahay koox shaqaale xirfad leh oo shaqaynayey in ka badan 10 sano.Khibraddooda wax-soo-saarka iyo tignoolajiyada aad ayay qani iyo xirfad u leeyihiin.Waxaan haynaa dhaqaale nagu filan si aan u hubinno shaqada caadiga ah ee warshadda.
Q3: Adeeg noocee ah ayaad bixin doontaa?
J: Ujeedada asalka ah ee shirkadeena waa inay xalliso DHIBAATOOYINKA oo dhan dhammaan macaamiisheena.Sidaa darteed, xitaa haddii aanu buuxin kari waynay shuruudahaaga qaarkood, waxaanu la xidhiidhi doonaa warshadahayada iskaashatada, kuwaas oo awood u leh inay buuxiyaan shuruudahaaga, qiimo macquul ah iyo tayo sare leh.
Q4: Goorma ayaan heli karaa qiimaha?Ma heli karaa qiimo dhimis?
J1: Guud ahaan Hadalka, waxaanu ku siinaynaa odhaah rasmi ah 24 saacadood gudahood, iyo soo jeedinta gaarka ah ee la habeeyey ama nashqadaysan kama badna saacadaha 72.Kiis kasta oo degdeg ah, fadlan si toos ah noogula soo xiriir telefoon ama iimayl noogu soo dir.
A2: Haa, dalabka wax soo saarka ballaaran, iyo macaamiisha caadiga ah, sida caadiga ah, waxaan siinaa qiimo dhimis macquul ah.
Q5: Maxaa la sameeyaa haddii ay dhacdo alaab waxyeello leh inta lagu jiro gaadiidka?
J: Si looga fogaado dhibaato kasta oo soo socota oo ku saabsan arrinta tayada, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso alaabta marka aad hesho.Haddii ay jirto wax gaadiid ah oo waxyeeloobay ama tayada tayada leh, fadlan qaado sawirada faahfaahsan oo nala soo xiriir sida ugu dhaqsaha badan, waxaanu si sax ah u maarayn doonaa si aan u hubinno in khasaarahaagu uu hoos u dhaco inta ugu yar.
Q6: Ma ku dari karaa Logo-kayga Alaabta?
J: Haa, Qaybaha Mashiinka, waxaan u isticmaali karnaa Goynta Laser-ka ama Sawirka si aan ugu dhejino astaantaada;Qaybaha xaashida birta ah, qaybaha isku dhejinta iyo qaybaha balaastiga, fadlan noo soo dir calaamada waxaanu ku samayn doonaa caaryo.
Q7: Suurtagal ma tahay in la ogaado sida alaabtaydu u socoto adiga oo aan tagin warshadaada?
J: Waxaan bixin doonaa Jadwalka Wax-soo-saarka oo faahfaahsan waxaanan u diri doonaa Warbixinta Toddobaadlaha ah ee Sawirrada, taas oo ku tusinaysa hababka farsamaynta ee faahfaahsan.Dhanka kale, waxaan bixin doonaa Warbixinta QC ee nooc kasta oo Alaabooyin ah ka hor intaan la keenin.
Q8: Haddii aad samayso alaab tayo liidata, ma nagu soo celinaysaa?
J: Sida xaqiiqda ah, ma qaadan doono fursad aan ku samayno alaab tayo liidata.Guud ahaan, waxaan soo saari doonaa alaab tayo wanaagsan leh ilaa aad ka helayso qanacsanaantaada.
Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey, Cnc Titanium Machining, Mashiinka gaarka ah, Makiinada, Machining sax ah, Qaybaha Mashiinada Saxda ah,